12/12 Sales - Shop.com.mm Online Shopping Myanmar
Laptops (upto 35% off)
Acer Aspire Z22-780 ( All In One )
-30% Ks 590,300 Ks 843,200
-25% Ks 443,400 Ks 591,600
Acer Aspire R3-131T(Pentium)
-21% Ks 408,000 Ks 516,800
HP Pavilion 15-AU169TX ( I3 ) ( Silver )
-10% Ks 649,000 Ks 720,800
-10% Ks 380,800 Ks 421,600
-20% Ks 1,033,600 Ks 1,292,000
Sony Xperia C 2305 Dual Sim - အနက်ရောင်
-47% Ks 153,000 Ks 290,000
Sony Xperia Z2 (4G) Smartphone - ခရမ်းရောင်
-45% Ks 274,000 Ks 499,000
Sony Xperia X (4G) - White
Sony Xperia Z3 (4G) Smartphone - ကြေးရောင်
-36% Ks 385,000 Ks 599,000
Samsung Galaxy C9 Pro (4G) Dual Sim - Pink Gold
Samsung Galaxy A5 (2017) (4G) Dual Sim Smartphone - ရွှေရောင်
Gionee P8 Max (4G) Dual Sim Smartphone - အဖြူရောင်
Sony Xperia XA 1 (4G) Dual Sim - အဖြူရောင်
-16% Ks 309,000 Ks 369,000
Samsung Galaxy Xcover4(4G) - အနက်ရောင်
Sony Xperia C 2305 Dual Sim - အဖြူရောင်
Sony Xperia X (4G) - Graphite Black
Sony Xperia Z3 (4G) Smartphone - အနက်ရောင်
Samsung Galaxy C9 Pro (4G) Dual Sim - ရွှေရောင်
Sony Xperia XA 1 (4G) Dual Sim - ပန်းရောင်
Samsung Galaxy J5 Prime (Dual Sim) 4G - ရွှေရောင်
Samsung Galaxy C9 Pro (4G) Dual Sim - အနက်ရောင်
Samsung Galaxy S8 (4G) Dual Sim - ရွှေရောင်
Motorola E4 + 4G Dual Sim - Grey
Amazing Deals(Special prices)
Chigo CS-25-M155 Spilt Type Air Conditioner (1HP) - အဖြူရောင်
Apple IPhone 8 Plus (4G) (256GB) - ငွေရောင်
Apple Series3Nike Edition IWatch With Sport Band - အနက်ရောင်
LG 32" Full HD LED TV - အနက်ရောင်
Apple IPhone 8 Plus (4G) (64GB) - ငွေရောင်
Lenovo S1 Lite (Dual Sim) 4G - အပြာရောင်
Zerowatt YLR-1.5-JX-12 Water Dispenser (Buttom Load)
Ariston Storage Water Heater (30 Litre)
-5% Ks 160,550 Ks 169,000
Midea YL-1631SB ရေပူရေအေးစက်
Skyworth SRD-118DT Two Door Refrigerator - Silver Metallic
LG 205L Two Door ရေခဲသေတ္တာ - GN-B202SQBB + Safe Guard Gift
SYH W3000 (7") (2G/3G Dual Sim)
Xiaomi Redmi Note 4X (4G) Hybrid Dual Sim - ရွှေရောင်
Samsung (upto 44% off)
Samsung Galaxy K Zoom (3G) - အနက်ရောင်
Samsung Galaxy A8 SM-A800 (4G) Dual SIM - ရွှေရောင်
Samsung Galaxy A5 2016 Edition (Dual Sim) (4G) - ရွှေရောင်
Samsung Galaxy A8 SM-A800 (4G) Dual Sim – အဖြူရောင်
Samsung Galaxy A5 2016 Edition (Dual Sim) (4G) – ပန်းရောင်
Samsung Galaxy S6 (32GB) (4G) Dual Sim - ရွှေရောင်
Samsung Galaxy Note5(4G) - အနက်ရောင်
Sony(upto 53% off)
Sony Xperia X (4G) - Lime Gold
Sony Xperia XZ (4G) Dual Sim - အနက်ရောင်
Sony L1 (Dual Sim) 4G - အဖြူရောင်
-23% Ks 229,000 Ks 299,000
Sony Xperia Z5 (Dual SIM) (4G) - White
Sony Xperia XA (4G) Dual Sim - Lime Gold
-9% Ks 199,000 Ks 219,000
Sony L1 (Dual Sim) 4G - ပန်းရောင်
Sony Xperia XA (4G) Dual Sim - Black
Sony Xperia XA (4G) Dual Sim - White
Samsung A9 Pro (Dual Sim) 3G - ရွှေရောင်
Samsung A9 Pro (Dual Sim) 3G - အနက်ရောင်
Erke shoes(upto 60%)
ERKE အမျိုးသမီးစီး ရှူးဖိနပ် - အပြာရောင်
-55% Ks 30,000 Ks 67,000
ERKE အမျိုးသမီးစီး ရှူးဖိနပ် - စိမ်းပြာရောင်၊ အစိမ်းရောင်
ERKE ယောကျာ်းလေးစီး ရှူးဖိနပ် - အပြာရင့်
-57% Ks 30,000 Ks 69,000
ERKE အမျိုးသားစီး အပြေးလေ့ကျင့်သည့် ရှူးဖိနပ် - အနက်ရောင်/လိမ္မော်ရောင်
-63% Ks 30,000 Ks 80,700
ERKE ယောကျာ်းလေးစီး ဘတ်စကတ်ဘော လေ့ကျင့်သည့် ရှူးဖိနပ် - အနက်ရောင်/အပြာရောင်
-56% Ks 35,000 Ks 79,000
ERKE အမျိုးသမီးစီး အပြေးလေ့ကျင့်သည့် ရှူးဖိနပ် - အနက်ရောင်/ပန်းသီးစိမ်းရောင်
-55% Ks 30,000 Ks 66,000
ERKE အမျိုးသမီးစီး လမ်းလျှောက်ရှူးဖိနပ် - အညိုရင့်ရောင်/အဝါရောင်
-54% Ks 30,000 Ks 65,000
ERKE အမျိုးသမီးစီး ရှူးဖိနပ် - ခရမ်းရောင်
ERKE ယောကျာ်းလေးစီး ရှူးဖိနပ် - အပြာရောင်
ERKE အမျိုးသမီးစီး အပြေးလေ့ကျင့်သည့် ရှူးဖိနပ် - ခရမ်းရောင်/အပြာနုရောင်
-53% Ks 40,000 Ks 84,400
-52% Ks 30,000 Ks 63,000
ERKE အမျိုးသမီးစီးစကိတ်ဘုတ် ရှူးဖိနပ် - အဖြူရောင်
ERKE ယောကျာ်းလေးစီး လမ်းလျှောက် ရှူးဖိနပ်
ERKE အမျိုးသမီးစီး အပြေးလေ့ကျင့်သည့် ရှူးဖိနပ် - ခရမ်းရောင်
ERKE ယောကျာ်းလေးစီး တင်းနစ်ရိုက် ရှူးဖိနပ် - အပြာရင့်ရောင်
ERKE အမျိုးသမီးစီးစကိတ်ဘုတ် ရှူးဖိနပ် - ပန်းသီးစိမ်းရောင်
ERKE ယောကျာ်းလေးစီး စကိတ်ဘုတ် ရှူးဖိနပ်
ERKE အမျိုးသမီးစီး အပြေးလေ့ကျင့်သည့် ရှူးဖိနပ် - ပန်းဆီရောင်
ERKE ယောကျာ်းလေးစီး အပြေးလေ့ကျင့်သည့် ရှူးဖိနပ်
ERKE ယောကျာ်းလေးစီး အပြေးလေ့ကျင့်သည့် ရှူးဖိနပ် - အပြာရင့်/လိမ္မော်ရောင်
-54% Ks 40,000 Ks 87,900
ERKE ယောကျာ်းလေးစီး အပြေးလေ့ကျင့်သည့် ရှူးဖိနပ် - အစ်ိမ်းရောင်/အနက်ရောင်
ERKE ယောကျာ်းလေးစီး စကိတ်ဘုတ် ရှူးဖိနပ် - အနီရောင်/အစိမ်းရင့်ရောင်
Home appliances(upto 15% off)
Zerowatt GZ109/1-30S (Fully Auto Front Load) အ၀တ်လျှော်စက် (9kg) - အဖြူရောင်
Beko CF374W Chest Freezer (107 Litres) - အဖြူရောင်
-5% Ks 275,500 Ks 290,000
Ariston Easy Electric Instant Water Heater
-5% Ks 109,250 Ks 115,000
Beko RDNT230I50P ရေခဲသေတ္တာ (230 Litres)
-5% Ks 379,050 Ks 399,000
Beko WTL70019W 7Kg (Top Loader) အဝတ်လျှော်စက် - အဖြူရောင်
-5% Ks 284,050 Ks 299,000
Beko HDCG 32221FX မီးဖို
-5% Ks 171,000 Ks 180,000
Beko RAS121LS ရေခဲသေတ္တာ (635 Litres)
-5% Ks 1,091,550 Ks 1,149,000
Beko CFB 6433 XG Cooker Hood
Beko WMB51011W အဝတ်လျှော်စက် (5 KG) - အဖြူရောင်
Beko ရေနွေးငွေ့မီးပူ - ပန်းရောင် (1800-2200W)
-5% Ks 42,750 Ks 45,000
Beko Vacuum Bagged - 1600 W
-5% Ks 84,550 Ks 89,000
Beko ရေနွေးအိုး - အနက်ရောင် (2200 W)
-5% Ks 34,200 Ks 36,000
Beko WSA14000 Chest Freezer (139 Litres)
-5% Ks 399,000 Ks 420,000
Ariston Slim Model Storage Water Heater (100 Litre)
-5% Ks 308,750 Ks 325,000
Beko RDNT230I20VZP Double Top - Freezer Top ရေခဲသေတ္တာ (230 Litres) - ငွေရောင်
-5% Ks 474,050 Ks 499,000
Beko WTL 10019 W အဝတ်လျှော်စက် (Top Load) 10Kg - အဖြူရောင်
-5% Ks 369,550 Ks 389,000
Beko MOC20100W မိုက်ခရိုဝေ့ဗ် (20 Liters)
-5% Ks 94,050 Ks 99,000
Beko GNE 114610 APX တံခါး၎ခုပါ ရေခဲသေတ္တာ (610 Litres)
-5% Ks 1,899,050 Ks 1,999,000
Beko HCG92741B Cooker Hood
Beko DIN15210 Built In ပန်းကန်ဆေးစက် - အဖြူရောင်
-5% Ks 759,050 Ks 799,000
Beko ရေနွေးငွေ့မီးပူ - အပြာနုရောင် (1800-2200W)
Beko Vacuum Bagless - လိမ္မော်ရောင်
Beko ရေနွေးအိုး - ခဲရောင် (2400 W)
-5% Ks 71,250 Ks 75,000
The Beauty Boutique(upto 80% off)
Wet n Wild Color Icon Eyeshadow Trio – Don't Steal My Thunder
Wet n Wild Idol Eyes Cre'me Eyeshadow – Envy
-80% Ks 1,500 Ks 7,500
Wet n Wild Mega Last Salon Nail Color – Bite The Bullet
Wet n Wild Color Icon Eye Liner Pencil – Sky Blue
Wet n Wild Fast Dry Nail Color – Pary Of Five Glitter
Wet n Wild Color Icon Eye Liner Pencil – Turquoise
-80% Ks 840 Ks 4,200
Travel Bags(upto 70% off)
-50% Ks 17,500 Ks 35,000
Polo World ခရီးဆောင်အိတ် - အနက်ရောင်
-70% Ks 155,400 Ks 518,000
Swiss Gear Sherpa ကျောပိုးအိတ် - အနက်ရောင်၊ အနီရောင်
Lusetti ခရီးဆောင်အိတ် - အနီရောင်
-70% Ks 83,400 Ks 278,000
Swiss Gear Skywalk ကျောပိုးအိတ် - အနက်ရောင်၊ အညိုရောင်
Polo World ခရီးဆောင်အိတ် - ငွေရောင်
-70% Ks 89,400 Ks 298,000
Swiss Gear Mercury ကျောပိုးအိတ် - အစိမ်းရောင်
-70% Ks 107,400 Ks 358,000
Lusetti ခရီးဆောင်အိတ် - အနက်ရောင်
-70% Ks 71,400 Ks 238,000
Swiss Gear Sun ကျောပိုးအိတ် - အစိမ်းရောင်
-70% Ks 131,400 Ks 438,000
Swiss Gear Sun ကျောပိုးအိတ် - အနီရောင်
Swiss Gear Skywalk ကျောပိုးအိတ် - အညိုရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်
Polo World ခရီးဆောင်အိတ် - အပြာရောင်
Lusetti ခရီးဆောင်အိတ် - ငွေရောင်
Polo World ခရီးဆောင်အိတ် - ရှန်ပိန်ရောင်
Lusetti ခရီးဆောင်အိတ် - အပြာရောင်
Lusetti ခရီးဆောင်အိတ် - ခရမ်းရောင်
-70% Ks 95,400 Ks 318,000
Lusetti ခရီးဆောင်အိတ် - လိမ္မော်ရောင်
Daily Utilites(upto 40%)
Dove Nourishing Oil Care Shampoo (320ml) X 2
-40% Ks 4,623 Ks 7,706
POND'S Flawless White (Deep Whitening Facial Foam - 100 G ,Lightening Day Cream - 50 G ,Brightening Night Cream - 50 G)
-30% Ks 12,140 Ks 17,343
Close Up Deep Action - 24 Hrs Fresh Breath (160 G) + Deep Action - 24 Hrs Fresh Breath (160 G)
-35% Ks 1,121 Ks 1,726
Clear Men Anti Dandruff- Cool Sport Menthol Shampoo (340ml)x2
-35% Ks 4,810 Ks 7,400
POND'S Acne Clear Facial Foam - 50 G + Acne Clear Leave-On Expert Clearing Gel - 20 G
-30% Ks 2,175 Ks 3,106
Clear Anti Dandruff Nourishing Shampoo- Ice Cool Menthol (340ml)x2
POND'S Acne Clear Facial Foam - 100 G + Acne Clear Leave-On Expert Clearing Gel - 20 G
-30% Ks 3,059 Ks 4,371
Dove Volume Nourishment Shampoo - 320ml X 2
Dove Total Damage Treatment Shampoo (320 Ml) X 2
-30% Ks 4,951 Ks 7,073
POND'S Age Miracle Cell ReGEN Facial Foam - 100g, Age Miracle Cell ReGEN Deep Action (Day Cream - 50 G ,Night Cream - 50 G)
-30% Ks 19,844 Ks 28,348
Cathy doll(upto 90% off)
Cathy Doll Gluta & Arbutin Thanakha Day Cream 30g (Oriental's Secret)
-95% Ks 300 Ks 5,900
Cathy Doll Crystal Flora Powder Pact SPF15 11g
-74% Ks 3,700 Ks 14,500
BOYA Q10 Treatment Essence 115g
-72% Ks 900 Ks 3,200
Cathy Doll Body CC Cream SPF30 PA+++ 128ml (Speed White)
-71% Ks 3,500 Ks 12,000
Cathy Doll Firming Sauna Bath Gel 460ml - Chili Bomb
-68% Ks 3,800 Ks 12,000
Cathy Choo Summer Mango Body Bath Cream 250ml
-67% Ks 4,900 Ks 15,000
Cathy Doll Vit E Eye Crayon
# Purple # White
Cathy Doll Makeup Cleansing Milk 100ml (Oh! So Clean)
-65% Ks 3,100 Ks 8,900
Penshoppe အမျိုးသားဝတ် ဗြောင်ဒီဇိုင်း လက်တိုရှပ်အင်္ကျီ - နက်ပြာရောင်
-50% Ks 15,450 Ks 30,900
Penshoppe အမျိုးသားဝတ် ခေါင်းစွပ်လက်ရှည်အင်္ကျီ - ခဲရင့်ရောင်
-20% Ks 26,320 Ks 32,900
Penshoppe အမျိုးသားဝတ် အစက်လေးများပါ လက်တိုပိုလိုရှပ်အင်္ကျီ - ခဲရောင်
-50% Ks 10,950 Ks 21,900
Penshoppe အမျိုးသားဝတ် ဗြောင်ဒီဇိုင်း လက်တိုတီရှပ်အင်္ကျီ - အနက်ရောင်
-20% Ks 14,320 Ks 17,900
Penshoppe အမျိုးသားဝတ် ပန်းပွင့်လေးများပါ လက်တိုပိုလိုရှပ် - နက်ပြာရောင်
-50% Ks 11,950 Ks 23,900
Penshoppe အမျိုးသားဝတ် အစက်အပြောက်ပါဒီဇိုင်း လည်ပင်းအ၀ိုင်းတီရှပ်အင်္ကျီ - အနက်ရောင်
Penshoppe အမျိုးသားဝတ် ကြယ်သီးတပ်လက်တိုရှပ်အင်္ကျီ - အပြာရောင်
-20% Ks 23,120 Ks 28,900
Penshoppe အမျိုးသားဝတ် အောက်နားခေါက်ဒီဇိုင်း ဂျင်းဘောင်းဘီရှည် - အပြာရောင်
-50% Ks 18,950 Ks 37,900
Penshoppe အမျိုးသားဝတ် ဂျင်းဘောင်းဘီရှည် - အပြာရောင်
-20% Ks 29,520 Ks 36,900
Penshoppe အမျိုးသားဝတ် နှစ်ရောင်စပ်ဒီဇိုင်း လက်တိုတီရှပ်အင်္ကျီ - ခဲရောင်
Penshoppe အမျိုးသားဝတ် ဂျင်းဘောင်းဘီရှည် - ခဲရင့်ရောင်
Penshoppe အမျိုးသားဝတ် ဗြောင်ဒီဇိုင်း လက်တိုပိုလိုရှပ်အင်္ကျီ - နက်ပြာရောင်
-20% Ks 18,320 Ks 22,900
Penshoppe အမျိုးသားဝတ် ဆေးရိုက်ဒီဇိုင်း ဘောင်းဘီတို - အနက်ရောင်
-50% Ks 12,950 Ks 25,900
Penshoppe အမျိုးသားဝတ် စတစ်ကာပုံပါ လက်တိုတီရှပ်အင်္ကျီ - အဖြူရောင်
Penshoppe အမျိုးသားဝတ် စတစ်ကာပါ လက်ရှည်ခေါင်းစွပ်အင်္ကျီ - အနက်ရောင်
-20% Ks 19,120 Ks 23,900
Penshoppe အမျိုးသားဝတ် အပြဲဒီဇိုင်း ဂျင်းဘောင်းဘီရှည် - အနက်ရောင်
JVC HA-F10C-KN Stereo Headphones
Trendwoo Beat It Speaker - Silver
JVC HA-NC260-J Noise Canceling Headphones
Dreamwave Tremor Bluetooth Speaker - Black & Dark Green
Trendwoo Pocket Speaker
JVC HA-FX8-W-K Headphones
Trendwoo Rockman S Speaker
Dreamwave Harmony Bluetooth Speaker - Beige
Trendwoo Rockman L Speaker
Trendwoo Blade Speaker - Red
Dreamwave Bubble Bluetooth Speaker
Trendwoo Freeman X6 Speaker
Trendwoo Blade Speaker - Orange
Dreamwave Elemental Bluetooth Speaker - Black & Dark Green
STABILO PEN 68 (COLOR PARADE 20PEN)
-50% Ks 7,200 Ks 14,400
STABILO POINT 88 Fineliner (25PCS)- ROLLER SET
-50% Ks 9,000 Ks 18,000
STABILO Original Thin Lead Coloring - 24 Pcs
-50% Ks 11,400 Ks 22,800
STABILO Original Thin Lead Colouring - 38pcs
-50% Ks 15,600 Ks 31,200
STABILO Color Pencil Set 3.8mm Thick Lead (36pcs)
-50% Ks 5,250 Ks 10,500
STABILO AQUACOLOR Pencil ( WATER COLOR ) 24PCS
-50% Ks 5,200 Ks 10,400
STABILO Exam Grade Set
-50% Ks 1,450 Ks 2,900
STABILO POINT 88 Shades Of Blue Fineliner Pen (8 Pcs)
-50% Ks 2,880 Ks 5,760
STABILO PEN 68 6PCS WALLET
-40% Ks 2,610 Ks 4,350
STABILO POINT 88 Fineliner (10PCS) WALLET
-40% Ks 4,320 Ks 7,200
STABILO Trio2In 1 Pen
STABILO Original Coloring - 12 Pcs
-40% Ks 6,600 Ks 11,000
STABILO Color Pencil Set 3.8 Mm Thick Lead - 12pcs (Half)
-40% Ks 1,320 Ks 2,200
STABILO Color Pencil Set - 3.8 Mm Thick Lead - 12pcs
STABILO Color Pencil Set 3.8 MM Thick Lead - 24 Pcs
-40% Ks 4,260 Ks 7,100
STABILO Color Pencil Set (12PCS) - (HALF )
-40% Ks 1,080 Ks 1,800
STABILO Color Pencil Set (12PCS) - LONG
STABILO Color Pencil Set - 24pcs
-40% Ks 3,600 Ks 6,000
STABILO YIPPY WAX 12PCS (HALF )
-40% Ks 756 Ks 1,260
STABILO Yippy Wax - 24Pcs (HALF )
STABILO Easy Ergo Pencil
STABILO POINT 88 Shades Of Red Fineliner Pen (8 Pcs)
STABILO POINT 88 Pastel 8PCS Wallet
STABILO Pen 68 Fibre Tip Pens Wallet - 8 Pastel Colours
STABILO POINT 88 Fineliner Pens ColorParade
STABILO PEN 68 6PCS - NEON
Erke Fashion(upto 73%)
ERKE အမျိုးသားဝတ် ကော်လာဝိုင်း လက်ရှည် ဆွယ်တာ - အနက်ရောင်
-69% Ks 9,000 Ks 29,000
ERKE အမျိုးသမီးဝတ် ခေါင်းစွပ် လက်ပြတ် Waistcoat - အပြာေ၇ာင်
-73% Ks 12,000 Ks 45,000
XS S XL XXL 2XS
ERKE အမျိုးသမီးဝတ် ဇစ်ပါသည့် Sweatshirt - အသားရောင်
ERKE အမျိုးသားဝတ် Casual ဘောင်းဘီ - အနက်ရောင်
-67% Ks 15,000 Ks 45,000
ERKE အမျိုးသားဝတ် လက်ရှည် လည်ဝိုင်း အကျီင်္ - အနက်ရောင်
ERKE အမျိုးသားဝတ် လက်ရှည် ရှပ်အကျီင်္ - အသားရောင်/အနီရောင်
-66% Ks 15,000 Ks 44,000
ERKE အမျိုးသမီးဝတ် လက်ရှည် Polo - အနီရောင်/သစ်ရွက်စိမ်းရောင်
-71% Ks 12,000 Ks 42,000
ERKE အမျိုးသားဝတ် လည်ဝိုင်းတီရှပ် - အပြာရင့်ရောင်
-66% Ks 12,000 Ks 35,000
ERKE အမျိုးသမီးဝတ် ဇစ်ပါသည့် Sweatshirt - အပြာရောင်
ERKE အမျိုးသမီးဝတ် လက်ရှည် Polo -အပြာရောင်/အစိမ်းရောင်
-64% Ks 15,000 Ks 42,000
ERKE အမျိုးသမီးဝတ် Leisure ဘောင်းဘီ - အနက်ရောင်
-69% Ks 12,000 Ks 39,000
XS XL XXL 2XS
ERKE အမျိုးသားဝတ် ဇစ်ပါသည့် ဆွယ်တာ - အပြာရောင်
-64% Ks 20,000 Ks 56,000
ERKE အမျိုးသမီးဝတ် ချည်သားဘောင်းဘီ - မီးခိုးရောင်
ERKE ယောကျာ်းလေးဝတ် ဇစ်ပါသည့် ဆွယ်တာ - အနက်ရောင်
ERKE အမျိုးသမီးဝတ် အားကစား ဘောင်းဘီ - အနက်ရောင်
ERKE အမျိုးသားဝတ် ဂျာကင် အထူ - အနက်ရောင်
-62% Ks 20,000 Ks 53,000
Cases &Covers(upto 70%)
QWL Iphone6Diamond Cover
-69% Ks 4,000 Ks 13,000
Creative Iphone7Creative Case - Pink
-45% Ks 25,500 Ks 46,000
High Class Iphone6Cover - Gold
-67% Ks 5,000 Ks 15,000
X-Level Iphone 7+ Goodcyl - Dark Blue
-31% Ks 9,000 Ks 13,000
Icarer Genuine Leather Vintage Series Back Cover For IPhoneX - အညိုရောင်
Icarer Luxury Series (Side-open) For IPhone7Plus/8 Plus - အနက်ရောင်
-44% Ks 17,500 Ks 31,500
High Class Iphone6Cover - Rose Gold
Icarer Vintage Series For IPad Mini4- အညိုရောင်
-31% Ks 38,000 Ks 55,000
High Class Iphone6Cover - Silver
Icarer Vintage Series (Side-open) For IPhone 7/8 - အနီရောင်
High Class Iphone 6+ Cover - Gold
Deals under 20,000 ks
SP Plastics Clever Cutter
-54% Ks 5,500 Ks 12,000
Infinity Multi-functional combination cruet for spice
-20% Ks 4,400 Ks 5,500
Jordana Color Envy Waterproof Liquid Eyeliner (Black Envy)
Creme21 Shampoo And Shower Gel For Men - Sport Champ (250ml)
-50% Ks 2,050 Ks 4,100
Canmake Cosmetic Your Lip Only Gloss (Shade No.03)
-20% Ks 14,960 Ks 18,700
Silky Girl Magic BB White Powder Foundation
LOOK ယောကျာ်းလေးဝတ် Dance With The Deadစာတန်း ပါ တီရှပ် - အနက်ရောင်
-29% Ks 5,000 Ks 7,000
DreamCatcher Dream Catcher - လိမ္မော်နှင့်အပြာ
Hand Fidget Spinner Fidget Spinner - Orange Pattern (HS 1111)
-95% Ks 425 Ks 8,500
Blue mountain Sparkling (380ml X 12 pcs) + Free T-shirt
-10% Ks 3,240 Ks 3,600
Ottie Moisture Holic Lip Rouge 5.5g - #4
CALLA Matte Hot Red (2.1g / 07oz)
-30% Ks 6,720 Ks 9,600
My Fashion Nova ဆေးရိုက်ဒီဇိုင်း ခါးရှည်လက်စက ဘလောက်စ်အင်္ကျီ - ပန်းရောင်
Baby Bright Moist Collagen Gloss 1.5ml
-65% Ks 1,950 Ks 5,500
#1 Coral Orange #2 Orange Tulip #3 Pink Like Sakura
Jordana Color Envy Waterproof Liquid Eyeliner (Brown Desire)
-20% Ks 3,280 Ks 4,100
Canmake Cosmetic Your Lip Only Gloss (Shade No.04)
Silky Girl Color Junkie Lip Polish - PerkySally
-30% Ks 6,160 Ks 8,800
MAKE UP STORE Nail Polish - LINDA
-58% Ks 8,000 Ks 19,000
LOOK ယောကျာ်းလေးဝတ် The Cure စာတန်းပါ တီရှပ် - နက်ပြာရောင်
DreamCatcher Dream Catcher - ခရမ်းနှင့် အနက်ရောင်
Hand Fidget Spinner Fidget Spinner - Blue Leopard (HS 1111)
Blue mountain Orange (380ml X 12 pcs) + Free T-shirt
My Fashion Nova ဆေးရိုက်ဒီဇိုင်း ခါးရှည်လက်စက ဘလောက်စ်အင်္ကျီ - အ၀ါနုရောင်
ဈေးဝယ်ချစ်သူများအတွက် ၁၂ရက်၁၂လ ဈေးရောင်းပွဲ!
ဆောင်းရာသီရောက်လာခဲ့ပါပြီ! ဒီဇင်ဘာလမှာ သူသူကိုယ်ကိုယ်မျှော်လင့်ကြတာကတော့ ခရစ်စမတ်ပိတ်ရက်များနဲ့ ရာသီလျှော့ဈေးတွေပဲပေါ့။ ခရစ်စမတ်ရုံးပိတ်ရက်တွေမရောက်ခင် ပျော်ရွှင်စွာ ဈေးကြိုတင်ဝယ်ယူနိုင်ကြဖို့ ၁၂/၁၂ ဈေးရောင်းပွဲ (ဒီဇင်ဘာ ၁၂ လျှော့ဈေးပွဲ)ကို shop.com.mm မှ တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။
ပိတ်ရက်မတိုင်ခင်လိုချင်သမျှပစ္စည်းတွေကို လျှော့ဈေးနဲ့ ကြိုတင်စုဆောင်းဝယ်ယူထားနိုင်ဖို့ ဒါဟာအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပါပဲ။ အားလပ်ရက်မတိုင်မီ ကိုယ်လိုချင်သမျှကို ဈေးတန်တန်လေးနဲ့ ဝယ်ယူရရှိနိုင်တာမို့ ပိုက်ဆံ ချွေတာပြီးသားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဖက်ရှင်မှစပြီး အလှကုန်၊လူသုံးကုန်၊ပရိဘောဂ၊လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ဖုန်း၊ကွန်ပြူတာ၊ဂိမ်းစက်များနဲ့ ကလေးသုံးပစ္စည်းများကို အချိုတကာ့အချိုသာဆုံးဆိုတဲ့ ဈေးနှုန်းများနဲ့ ဝယ်ယူရှိနိုင်မှာပါ။ လိုချင်တာတွေဝယ်ပြီးရင် အိမ်အရောက်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ ပစ္စည်းရပြီးမှငွေချေနိုင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပစ္စည်းအိမ်ကိုရောက်ရှိမှ Credit Card နဲ့ငွေပေးချေနိုင်မှုအပြင် Visa/MPU ကဒ်တို့ဖြင့်လည်း အွန်လိုင်းမှတဆင့်လွယ်ကူသက်သာစွာ ငွေပေးချေနိုင်ပါတယ်။